Lalàna N0 (7) momba ny 2006 momba ny
Lalàna N0 (7) momba ny 2006 momba ny fanoratana ara-barotra marina any amin'ny Emiratin'i Dubai
Mpitondra an'i Dubai ny maha-avo lenta azy Sheikh Mohammad Bin Rashid Al Maktoum dia nieritreritra ny Lalàna Federaly: 5 / 1985 mamoaka lalàna momba ny sivily ary ny fanitsiana azy; Ny Lalàna Federaly no: 11 / 1992 mamoaka ny volavolan-dalàna sivily sy ny fanitsiana nataony; Ny Lalàna eo an-toerana Tsy 7 / 1997 momba ny Fehezan-dalàna momba ny tany; ary ny Didim-panjakana momba ny fananganana Komitin'ny raharahan'ny tany amin'ny taona 1960; dia mamoaka ity lalàna manaraka ity.
Lohateny sy famaritana
Ity Lalàna ity dia antsoina hoe "Ny Lalàna momba ny fanoratana ny tany ao Emirà ao Dubai (No 7 / 2006)
Amin'ity Lalàna ity, ireto teny sy fehezan-teny manaraka ireto dia tokony hanana ny hevitr'izy ireo tsirairay avy, raha tsy hoe angaha tsy ilaina ny teny manodidina.
Emirà Arabo Mitambatra: Emirà Arabo Mitambatra.
Emirà: Emirà Arabo ao Dubai
Ny Governemanta: Ny Governemanta ao Dubai, anisan'izany ny ao amin'ny Departemantany, Manampahefana na orinasam-panjakana.
Ilay Mpitondra: Ny Avo Indrindra, ilay Mpitondra ao Dubai
Ny Departemanta: ny Departemantan'ny tany sy ny fananana
Ny loha: ny lehiben'ny sampana
Tale: ny tale jeneraly ny departemanta
Tany: Na inona na inona toetra voajanahary maharitra izay tsy azo esorina tsy manimba na manova ny endriny 1.
Zon'ny olom-pirenena: Ny zo na loharanon-kery rehetra momba ny tany
Firaketana an-tsoratra: tahirin-tsoratra notakian'ny Departemanta amin'ny endrika voasoratra na elektronika ao amin'ny rejisitra elektronika, manasongadina ny famaritana ny Tany voasoratra anarana, ny toerana misy azy ary ny zon'izany.
Ny vondron'olona: Ny sombin-tany rehetra sy izay rehetra ao aminy, toy ny trano, zavamaniry na zavatra hafa, any amin'ny tany iray
Faritra: Raha tsy misaraka amin'ny ampahany hafa amin'ny fananana na olon-tsotra tsy miankina ary tsy misy ny ampahany aminy izay manana zo na fahasamihafana izay tsy misy ny ampahany hafa.
Tanànan'ny vondrom-bahoakam-paritra: Vondron'olona ifoton'ireo làlam-piaramanidina lehibe na marika famantarana sy mari-pamantarana miaraka amin'ny anarana nomena anarana sy tarehimarika maromaro mifanaraka amin'ny fampiharana ny departemanta
Olona: Olona voajanahary na ara-dalàna.
Ny votoatin'ny fampiharana sy ny zo tokony ho zarazaraina
Io lalàna io dia ampiharina amin'ny tany hita ao amin'ny Emirat
Ny zon'ny tompon-tany amin'ny Emirà Emirà dia ho voafetra ho an'ny olom-pirenen'ny UAE, olom-pirenena mpiara-miasa amin'ny fanjakana any amin'ireo firenena arabo ao amin'ny Golfa, orinasa izay tompon'antoka amin'ny orinasa mitohy sy ny orinasam-panjakana. Ny olona vahiny dia mety homena amin'ny zom-bahoaka sasany ny zo manaraka: aorian'ny fankatoavan'ny mpitondra,
a) Ny zo hahazo ny tena fananana tany tsy misy famerana ny fotoana.
b) Ny zo hahazo tombontsoa na fampiasana ny Land mandritra ny fe-potoana tsy mihoatra ny 99 taona.
Ny antontan-taratasy momba ny antontan-taratasy sy ny didim-pitsarana amin'ny fanatanterahana izany
Ny fanoratana dia atao any amin'ny Sampan-draharaham-panjakana, ary tsy hoesorina ivelan'ny trano. Ny antoko azo antoka, ny manam-pahefana na ny manam-pahefana voatendry, ary koa ireo komity manana komity dia afaka mahazo izany loharano izany ary mahazo kopia voamarina mifanaraka amin'ny fepetra voalazan'ity Lalàna ity.
Fitsarana ny Departemanta
Ny Departemanta dia manana fahefana manokana hanoratana ny zon'ny tany sy ny vola azo antoka ao amin'ny Andininy 4 amin'ity Lalàna ity. Ho an'ity tanjona ity, ny sampana dia mety manao toy izao manaraka izao:
1. Mamaritra ny toerana tokony hohadihadiana na averina dinihana indray ary manamarina ireo sary natosika tamin'izany.
2. Soraty ny fitsipika mifandraika amin'ny fanadihadiana sy ny fisafoana, ary koa ny momba ny famoahana sarintany mifandraika amin'ny Vondron'olona;
3. Manomana endrika endrika fifanarahana mifandraika amin'ny fananan-trano;
4. Soraty ny fitsipika momba ny fikarakarana, ny famandrihana ny fandringanana ny antontan-taratasy;
5. Mametraka fitsipika mifandraika amin'ny fampiasana ordinatera amin'ny famahanana sy famerenana angona;
6. Mametraha fitsipika mifandraika amin'ny fitsipika sy ny fitazonana rejisitry ny mpampindram-bola tena izy;
7. Soraty ny fitsipika mifandraika amin'ny fanombanana ny tany
8. Mametraka fitsipika mifandraika amin'ny fivarotana an-tsitrapo amin'ny tany amin'ny alàlan'ny varotra ampahibemaso ary ny fanaraha-maso ny fivarotana toy izany;
9. Mamaritra ny saram-pandoa mety ho azon'ireo Sampan-draharaha; ary
10. Amboary ny sampan'ny Sampan-draharahan'ny Talen'ny Tale fa mety.
Ny rejisitry ny tany dia hotazonina ao amin'ny Departemantany hanoratana ny zon'ny olom-pirenena rehetra sy ny fiovana rehetra mety hitranga amin'ny fanajana azy ireo. Ny rejisitra dia ho porofo tsy azo lavina amin'ny rehetra sy ny rehetra raha tsy hoe vokatry ny hosoka na fametavetana ahy izany.
Ireo lohahevitry ny fepetra voalazan'ny Andininy (7) amin'ity Lalàna ity, ny antontan-taratasy elektronika rehetra dia manana ny lanjany ho porofo mitovy amin'ny an'ny kopia sarobidy nosoratana.
Ny fifampiraharahana rehetra izay mamorona, mandefitra, manova na manafoana ny zo amin'ny tany dia voasoratra ao amin'ny lisitry ny tany ary ny fitsaràna farany izay manamarina ireo fifanakalozana ireo dia ho voasoratra koa. Tsy misy fiaraha-miasa raha tsy voasoratra ao amin'ny rejisitry ny tany.
Ny fampandehanana rehetra handefa zo amin'ny taniny dia voafetra amin'ny adidy handoavana onitra raha toa ka mandika ny andraikiny ny tompon'andraikitra, raha toa ka misy volavola handoa onitra na tsia ny andraikitra.
Raha toa ka manana zo avy any amin'ny tany ny tany misy ny maty dia tsy hahomby na heken'ny antoko fahatany ny antoka momba ny lova raha tsy voasoratra anarana ao amin'ny Departemantan'ny Tany.
Ny departemanta dia mety ho ny tanjon'ny fitsinjaram-pialana no mampiala ny fangatahana ny fisoratana anarana nalefan'ireo olona manana tany izay tsy voasoratra anarana amin'ny anarany.
Fanovana na fanitsiana ny rakitsoratra ao amin'ny rejisitry ny tany
Ny Departemanta dia mety amin'ny fampiharana ny antoko liana iray na amin'ny alalan'ny fandraisana andraikitra amin'ireo izay voakasik'izany, ny fahadisoana ara-pirazanana marina ao amin'ny firaketan'ny rejisitry ny tany.
Amin'ny fiaraha-miasa amin'ireo manampahefana voakasik'izany, ny Departemanta dia manavao ireo firaketana momba ny Land Units sy ny zavatra hita eo, toy ny trano, zavamaniry na zavatra hafa.
1. Ho an'ny fisoratana anarana ho an'ny Vondron'ny Tany sy ny Tany, ireto sarintany manaraka ireto dia miankina amin'ny:
* Sarintanin'ny tompona karazana;
* Sarintanin'ny Land Unit sy
* Sarintanin'ny Tany
2. Ny faritra tsirairay ao amin'ny faritra tsirairay dia hanana sarintany manokana izay manondro ireo Vondron'olona eo an-toerana sy ny isany.
3. Ny vondrona tsirairay dia hanana sarintany manokana manondro ny toerana misy azy, ny sisiny, ny sakany sy ny halavany, ny faritra, ny endri-javatra, ny fanorenana misy azy ary ny isa nomena ny tarika mpifanolo-bodirindrina aminy.
Mizara sy mifangaro
Raha mizarazara ny Tomban-tany manan-kery, ny zo amin'ny fanalefahana dia hijanona ho manohana ny ampahany tsirairay amin'izany, raha toa ka tsy mampitombo ny enta-mavesatra ho an'ny Land Unit. Na izany aza, raha ny tombontsoan'ny sasany ihany no mahazo tombony ho an'ny sasany, ny tompon'ny Tafika avy any amin'ny faritra izay mety hampiharina any amin'ny Sampan-draharahan'ny fampiatoana ny tombontsoa mety ho an'ny ampahany sasany amin'izany, ny tompon'ny orinasa mpiasan'ny Land dia mety hampiharina amin'ny Sampan-draharaha ny fampitsaharana ny zo amin'ny lafiny hafa.
Raha mizarazara ny Tombom-bahoakan'i Serveur, ny zo hanamora ny famerenana ny fisiany amin'ny ampahany tsirairay. Na izany aza, raha ny marina dia tsy ampiasaina amin'ny faritra sasany, ary tsy azo atao ny mampiasa izany amin'ireo faritra ireo, ny tompon'ny ampahany tsirairay dia azo ampiharina amin'ny Sampan-draharaha, mifanaraka amin'ny fepetra voalazan'ity lalàna ity, ho an'ny ny fampitsaharana ny zo amin'ny fanajana io ampahany io.
Ny fanimbana ny zo dia tsy misy intsony amin'ny fahazoana ny tompom-pahefana manan-kery avy amin'ny tompona.
Raha toa ka zaraina ho roa na marom-borona ny Tontolon'ny Tany izay voafatotry ny zon'ny fitaovam-piadiana amin'ny tany, dia ho tratran'ny fitaovana rehetra manerana ny tany ny vondrona vaovao vaovao. Ny tompony vaovao dia mety manaiky ny tombotsoan'ny zo fanampiny momba ny tany mba hizaràna azy amin'ny fomba toy izany mba hahafahan'ny Vondrona vaovao tsirairay mandrava ny ampahany aminy, izay ho voafaritry ny faneken'ny tsirairay.
Raha misy Tontolon'ny Tany sy ny iray amin'izy ireo dia voakitiky ny Accessoire Right Over Land raha tsy ny iray kosa, ny Accessoire Right Over Land dia hanitatra amin'ny faritra manontolo ao amin'ny Tontolon'ny firenena tsy misy fankatoavana ny fikambanan'ny mpandray tombony amin'ny zo ankinina amin'ny tany. Na izany aza, raha ny vondrona roa amin'ny faritra roa dia voakitiky ny zo mahaleotena mahaleotena amin'ny tany, dia ny mpitsoa-pon'ny tsirairay avy amin'ny Accessoire tsirairay avy toy ny Right Over Land dia tokony hankatoavin'ny fikambanana.
Ny fanovana rehetra ao amin'ny Tontolon'ny Tany amin'ny alalan'ny fizarana na ny fifangaroana dia voasoratra ao amin'ny lisitry ny tany.
Ny Departemanta dia mamoaka antontan-taratasy mifandraika amin'ny zon'ny tany amin'ny alàlan'ny rakitsoratra marina momba ny Lalàna momba ny Tany.
Raha tsy manavakavaka ny fepetra rehetra misy Lalàna hafa, ny tranobe trano sy trano maromaro dia ho raisina ho toy ny Firaisankinam-ponenana tokana ary hanana rakitsoratra iray ao amin'ny Lahatsoratry ny Land mba ho ampidirina amin'ny rakitsoratra milaza ny anaran'ny tompon'ireo trano, trano ary ampahany iraisana.
1. Ny rakitra tompon'ny fanambarana voalaza ao amin'ny lohahevitra 22 amin'ity Lalàna ity dia porofo manamarina ny Zon'Olona momba ny tany voatanisa ao.
2. Ao amin'ny rakitra momba ny tany dia misy fepetra, fampanantenana na fameperana momba ny zon'ny tany sy ny adidy hafa.
Fitsipika momba ny Lalàna Federal Transactions momba ny sivily Tsy 5 / 1985 ary ny fanitsiana azy dia ampiharina amin'ny raharaha rehetra tsy voalazan'ity Lalàna ity.
1. Ny fifanarahana na ny fifanarahana izay mifanohitra amin'ny fepetra voalazan'ity Lalàna ity dia tsy misy dikany ary tsy misy ny fifanarahana na ny fanamafisana natao mifanohitra amin'ny voalazan'ity Lalàna ity.
2. Ny tsy fisian'ny fifanarahana tahaka izany na fanesorana dia azo alaina eo anoloan'ny fitsarana ny olona tsirairay izay manana fahalianana, ary koa ny Departemantam-panjakana, na ny fanenjehana araka ny lalàna, ary ny tsy fisian'ny fandikan-dalàna tahaka izany dia mety ho baiko amin'ny fitsarana ihany koa ny fitsarana.
Ny didim-panjakana tamin'ny 6 novambra 1977 mikasika ny raharaha sivily sy heloka bevava momba ny fifampiraharahana mifandraika amin'ny famoahana ny tany ao Emirà ao Dubai dia hofoanana.
Ny Departemantan'ny Departemanta dia manome ny fitsipika rehetra, ny fanapahan-kevitra, ny didy ary ny torolàlana ilaina amin'ny fampiharana ny fepetra voalazan'ity Lalàna ity.
Io Lalàna io dia havoaka amin'ny Gazetim-panjakana ary manankery amin'ny daty famoahana azy.